Spotify mechara kwupụta ọkwa HiFi na enweghị mma ọnwụ | Gam akporosis
Spotify bụ ọrụ izizi egwu izizi kụrụ n'ahịa ahụ, dị ka WhatsApp, ọ meriri wee bụrụ ihe edere n'ahịa ahụ, ahịa nke na-achịkwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde 350 nde ndị ọrụ na-arụ ọrụ n'etiti ndị debanyere aha na ndị ọrụ nke nsụgharị n'efu.
Agbanyeghị, mgbe ihe karịrị afọ 12 gafere kemgbe mmalite ya, ọ kabeghị ọrụ dị elu dị ka nke anyị nwere ike ịchọta na Tidal kemgbe mmalite ya yana Amazon Prime HD, dị maka afọ ole na ole wee rute Spain na njedebe nke afọ gara aga.
Spotify Nnweta HiFi na Pnye ọnụahịa
Swedishlọ ọrụ Swedish gụgharia egwu ekwuputala Spotify HiFi, ọrụ egwu na-enweghị oke ọnwụ nke ga-amalite iru ụwa obere obere, ọ bụ ezie na akọwapụtabeghị ụzọ ụzọ ka anyị wee nwee ike ịmata oge anyị ga-anọ. enwe ike ịnụ ụtọ ya.
Banyere ọnụahịa, ekwuputabeghị ihe ha ga-abụ, mana ọ ga-abụrịrị na ha bụ otu ihe anyị nwere ike ịchọta ugbu a na Tidal, ọrụ egwu mbụ na-egwu egwu nke kwalitere ụdị ntụkwasị obi dị elu, euro 19,99 kwa ọnwa.
Amazon Prime HD, nke anyị nwere ike ịgbazite ma nwee obi ụtọ maka ọnwa 3 kpamkpam n'efu, nwere ọnụahịa nke 19,99 euro kwa ọnwa, ọnụahịa belata na 14,99 euro ma ọ bụrụ na anyị bụ ndị ọrụ gọọmentị, yabụ a priori, Ọ bụ ọnụ ala Nhọrọ na ahịa.
Ọrụ egwu gụgharia Apple ka na-anaghị enye, 6 afọ mgbe ọ malitere, a hi-fi mbipute, n'agbanyeghị Apple na-aga n'ihu itinye aka na egwu ma n'oge ahụ ọ dị ka usoro a adịghị na atụmatụ n'ọdịnihu nke ụlọ ọrụ Cupertino.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » gụgharia » Spotify mechara kwupụta ọkwa HiFi na enweghị ezigbo ọnwụ
Etu esi eme foto mbu na Instagram